Niara-nanafika tamina gadra nitsoaka : mpiandry fonja mpanao asan-jiolahy mitam-basy | NewsMada
Niara-nanafika tamina gadra nitsoaka : mpiandry fonja mpanao asan-jiolahy mitam-basy
Tena misy ny mpiandry fonja, tsy vitan’ny hoe miray tsikombakomba fotsiny fa tena manao fanafihana mitam-basy miaraka amin’ny jiolahy, izay efa gadra nitsoaka ny fonja mihitsy. Iray amin’ireny ity tratran’ny vela-pandriky ny zandary ity.
Nitondra fanazavana misimisy kokoa, ary nanamafy ny vaovao efa navoaka teto omaly, ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ny amin’ny fisian’ny mpiandry fonja miara-manao fanafihan-jiolahy amin’ny gadra nitsoaka ny fonja. Manamafy ny tranga fa miray tsikombakomba ireo mpiandry fonja sy ireo gadra raindahiny ao Tsiafahy. Porofon’izany, hoy ny zandary ity fahatrarana mpiandry fonja nanao asan-jiolahy, ary gadra nitsoaka no niara-nanao asa ratsy taminy. Sady fanehoana fa miasa ny zandary amin’ny fanenjehana ny jiolahy, kanefa toy ny manaitra ihany koa fa tsy mivoaboaka ho azy ireny gadra lazaina fa nitsoaka ireny fa ao raha. Toy izany koa ny basy ampiasain’ny olon-dratsy. Avy amin’ireo mpitandro filaminana ihany izany. Mpitandro filaminana ihany ny mpiandry fonja.
Nanamafy ny zandary fa efa nokarohina hatry ny ela tamina fakana an-keriny nandritra ny taona maro ireo. Lavo ka tsy afa-manohy ny asa ratsiny intsony kosa ny tena sangany sy rain-dahiny indrindra tamin’izany asa ratsy izany, izay efa nokarohin’ny mpitandro filaminana rehetra nandritra ny taona maro. I Mika beloha io, izay gadra 7 taona noho ny raharaha fanafihana mitam-piadiana teny Tsiafahy, ny taona 2008, nafindra teny Antanimora ny 2010 ary nandositra fonja tamin’ny 2012. Ity farany izay maty rehefa nifandona tamin’ny zandary teo am-pisamborana azy. Sarona tamin’izany ny basy poleta iray. Ilay mpiandry fonja sy ny mpamily taxi namany kosa noraisim-potsiny talohan’izay ny zoma lasa teo.
Nanafika teny Andravoahangy
Ry zalahy ireo no nanafika teny Andravoahangy, ary samy nanaovan’ny orinasa voatafika fitarainana na ny teo anivon’ny zandary na ny tany amin’ny polisy. Nanao ny fikarohana ireo olon-dratsy ireo andro aman’alina ny zandarin’ny Kaompanian’Antananarivo Renivohitra, ka tratra teny Analamahintsy cité ny marainan’ny zoma teo, ilay mpiandry fonja. Ity farany no nanjonoana ny namany, ka anisan’izany ilay gadra nitsoaka. Namany iray hafa kosa ny tafaporitsaka tamin’izany, ary mbola karohina. Notohizan’ny zandary ary ny fanadihadiana ka ny ampitson’io indray no nosamborina teny Andravoahangy ny mpiambina iray izay naman’izy ireo ihany ka mody nafatotra tamin’io raharaha io. Toa izany koa ny mpamily taxi iray izay mijanona eo akaikin’io orinasa io, samy voasaringotra tamin’izany fanafihana izany avokoa. Samy niaiky ny asa ratsy nataony izy ireo nandritra ny famotorana azy avy. Efa naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy ilay mpiandry fonja sy ny namany.